कोभिड संक्रमितलाई मनावैज्ञानिक सहयोग गर्दा … | eAdarsha.com
कोभिड संक्रमितलाई मनावैज्ञानिक सहयोग गर्दा …
असार १३, २०७८
‘हेलो । नमस्कार । म मनोविमर्शकर्ता हुँ । कोरोना भाइरसका कारण एकान्तबासमा बस्नु भएका व्यक्तिलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग गरिरहेको छु । आत्तिएको मनलाई शान्त बनाइरहेको छु । मैले दिनेश केसी (नाम परिर्वतन) लाई खोजेको । उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ । कस्तो छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ? उहाँसँग कुरा गर्न सकिन्छ ? एक पुरुषले उत्तर दिनु भयो ‘उहाँ आज बिहानैमात्र बित्नुभयो । भर्खरै शद्गद् गरि फर्केदै छौं ।’ मेरो बोली बन्द भयो । म आत्तिएँ । फोन काट्न सकिनँ । बोली हडबडायो । आवाज आएन । त्यस्तै ३० सेकेन्ड म मौन बसेँ । उनले ‘हेलो’, ‘हेलो’ भने । त्यसपछि मात्र मैले प्रतिक्रिया दिएँ ‘कस्तो दुखद् खबर, समाचार सुनेर दुख लाग्यो’ । त्यसपछि उनले दिनेशको बारे बताउन थाले । जीवनको अन्तिम क्षणसम्मको कथा र व्यथा ।’
यो कुराकानी अंश थियो एक कोरोना संक्रमणबाट आफन्त गुमाएका व्यक्ति र यस पंक्तिकारको । कोभिडको दास्रो महामारीसँगै मनोवैज्ञानिक सहयोग कार्य सुरु गरेको थिएँ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट मनोविमर्शका लागि केसहरु सिफारिस भएर आउँथ्यो । स्थानीय निकायले परियोजना कार्यान्यन गर्ने भएकाले केसहरु स्थानीय निकायबाटै आउँथे । लकडाउन भएकाले संक्रमितको घर घर जाने अवस्था थिएन । होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिलाई हरेक दिन फोन गर्थें ।
दैनिक १०÷१२ जनासँग घन्टौ कुराकानी हुन्थ्यो । सिफारिस भए आएका केही व्यक्तिसँग कुरा गर्ने अवसर मिल्दैनथ्यो । उहाँहरु कोभिडका कारण निधन भएसकेको जवाफ भेटिन्थ्यो । उहाँलाई बचाउन मैले सकिनँ तर आफन्त गुमाउनु भएका व्यक्तिहरुको पीडामा भने मनोवैज्ञानिक मलम लगाएँ । उहाँहरु फोनमै रुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई सम्हाल्न हम्मे हम्मे हुन्थ्यो । कुराकानीको अन्त्यसम्म आउँदा विपत्तिसँग लड्न सक्ने सोचाइ, भावनाको विकास गराउन प्रयास गर्थेँ ।
बारम्बार उहाँको पीडाहरु सुन्दा आफैंलाई गाह्रो हुन्थ्यो । भावुक बनाउँथ्यो । त्यसैले फोन गर्न पहिले भगवान सम्झन्थें । नमस्कार गर्थें । उहाँसँग बोल्न पाउँ भन्थें । मेरो प्रार्थनाले कहिलेकाहीं अर्थ राख्दैनथ्यो । निधन भयो भन्ने उत्तर बेलाबेला आइरहन्थ्यो । रुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्रतिक्रियाले नरमाइलो लाग्थ्यो ।
आफूलाई व्यवस्थापन गर्दै सहयोग गर्थें । पानी खाने, लामो लामो श्वासप्रश्वास विधि अवलम्बन गर्थें । फेरि अर्कोलाई फोन लगाउँथें । मैले मेरो कतव्र्य भुलिन् । लकडाउनको बेला घर खर्च चलाउन कठिन थियो । नियमित तलब आउँदैनथ्यो । सेवा दिएबापत आम्दानी राम्रै भएको थियो । घर खर्च ढुक्कले चलेको थियो ।
गत वर्षको लकडाउनमा मैले धेरैलाई मनोवैज्ञानिक सहयोग गरेको थिएँ । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश आइसोलेसन र क्वारिन्टनमा पुगेको थिएँ । धेरैले मनोवैज्ञानिक सहयोग पाएका थिएँ । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा फरक रह्यो । आइसोलेसनमा मान्छेहरु प्राय शून्य थियो । होम आइसोलेसनमा रहनु भएकाले फोन परामर्श विधि प्रयोगमा ल्याइयो । होम आइसोलेनकै कारण संक्रमणबाट निधन हुनेहरुको संख्या यो वर्ष धेरै भयो । चाहिने मात्रामा स्वास्थ्य उपचार पाएनन् । फलस्वरुप मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता बढी महसुस भएको थियो ।
एकान्तबासमा बस्दा संक्रमितहरु धेरै आत्तिएका थिएँ । व्यक्तिहरुमा डरको भावना बढेको थियो । चिन्ता थियो । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु आउनुको मुख्यकारण थियो अक्सिजन अभाव हुनु । उपचार पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता । संक्रमित व्यक्ति र उसका आफन्तहरुमा बढी चिन्ता थपिनु स्वाभाविकै थियो । उपचार गर्दा गर्दै कतिपय व्यक्तिहरुले आफन्त गुमाउनुभयो ।
पीडामा मलम लगाउँदा छुट्टै आनन्द लाग्थ्यो । कुराकानीले संक्रमित र उनका आफन्तहरुमा आत्मबल बढ्थ्यो, तनाव घट्थ्यो
लकडाउन भएको पहिलो साता पाका उमेरका व्यक्तिहरुलाई फोन गर्न डर लाग्थ्यो । दुखको खबर सुन्नुपर्छ कि भन्ने सोच बारम्बार आइ नै रहन्थ्यो । त्यसैले पौढ र किशोर किशोरीलाई बढी प्राथमिकता दिन्थेँ । पछि संक्रमणले किशोरकिशोरी भनेन । निधन हुनेहरुको संख्या पौढ र किशोर किशोरी भए । पछि किशोर किशारीहरुलाई फोन गर्न डर लाग्थ्यो । पीडामा मलम लगाउँदा भने छुटै आनन्द लाग्थ्यो । कुराकानीले संक्रमित र उनका आफन्तहरुमा आत्मबल बढ्थ्यो । तनाव घट्थ्यो । कोभिडले मनमा पारेको असरसँग जुध्ने उपाय पाउँथें । म एक्लो रहेनछु भन्ने भावनाको विकास हुन्थ्यो । स्वास्थ्य राम्रो भएपछि पटक पटक फोन आउँथ्यो । प्रेरणा दिनुभयो, मन शान्त भयो भन्दै फोन गर्थे । कोही संक्रमित व्यक्तिहरु लकडाउनपछि भेट्ने बाचा गर्दै छन् । उनीहरु भन्छन् ‘तपाईंलाई भेट्न पोखरा आउँछु ।’
तीन महिनाको अवधिमा झण्डै तीन सय संक्रमित व्यक्तिहरुसंँ मेरो कुराकानी भयो । आफन्त गुमाउनु भएका व्यक्तिहरुमा अझै पीडा छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु कम भएका छैनन् । संक्रमित भएर स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएका ५० प्रतिशत व्यक्तिहरु भने स्वाभाविक जीवनमा फर्कन थाल्नुभएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत व्यक्तिहरुले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमले सताइरहेको छ । संक्रमणमुक्त भइसक्दा पनि व्यक्तिको शरीर र मनले देखाइरहने अस्थिर अवस्थालाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ ।
प्राय शक्ति कमजोर भएको महसुस गर्ने, छिट्टै थकान महसुस हुने, जुरुक्क उठ्न नसक्ने, हात खुट्टाहरु गल्ने, नियमित काम गर्न नसक्ने लक्षण देखिन्छन् । खोकी लागिरहने, सवारी साधनमा चलाउन नसक्ने, छिट्टै रिँगाटा लाग्ने, श्वास फेर्न पनि कठिन हुने, छाती दुख्ने र पेट तातो हुनेजस्ता लक्षणहरु व्यक्तिले महसुस गरिरहेका छन् । यस्ता लक्षणहरु व्यक्तिहरुले दुई महिनादेखि तीन÷चार महिनाभन्दा पनि बढी अनुभव गरिरहेका छन् ।
अनुसन्धानकर्मीहरुका अनुसार पोस्ट कोभिडका लक्षणहरु कहिलेसम्म आइरहन्छन् भन्ने अझै पत्ता लागिसकेको छैन । त्यस्ता समस्या व्यवस्थापनका लागि धेरै व्यक्तिहरुले आइसोलेसनमा रहँदन खाना, पानीलाई जसरी ध्यान दिनुभएको थियो सोही अनुरुप हेरचाह गरिरहनु भएको छ । तातो पानी खाने, झोलिलो कुरा बढी खाने, चिसो खाने कुरा प्रायले खानुभएको छैन । यस्ता व्यवहारलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
शरीरमा सुधार नआएका कारण कतिपय व्यक्तिहरुमा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाहरु बढिरहेका छन् । बढी आत्तिने, काम गर्न ध्यान नजाने, दिक्क लाग्ने, उदासी हुने, जीवनमा केही गर्न सकिँदैन कि भन्ने भावनाको विकास भएको छ । केही समय समय शरीर प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविकै हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ, खानपिन, आराम र तनाव व्यस्थापन महत्वपूर्ण मानिन्छन् । आफूलाई गाह्रो भएको बेला स्वाथ्यकर्मी, मनोविमर्शकर्ता, मनोविद्, मानसिक चिकित्सकहरुको सल्लाह लिने गर्नुपर्छ ।
‘पोस्ट कोभिडका सिन्ड्रम’ सम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्य काहिर आइसकेका छैनन् । त्यस्ता लक्षणहरुले व्यक्तिलाई गुणात्मक हुनबाट रोकेको छ । व्यक्तिलाई थप मनोसामाजिक समस्या हुन थालेको छ । त्यसलै यस्ता समस्याको रोकथामका लागि औषधीमुलो भन्दा शरीर र मनको हेरचाहलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सकेसम्म एक्लै नबस्ने, घरको सानो सानो काममा व्यस्त रहने, हल्का शारीरिक व्यायाम, ध्यानहरु गर्ने, साथै मनलाई बहलाउने क्रियाकलापहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । बिस्तारै परिस्थिति सामान्य हुने हुनाले शरीर र मनमा आएका प्रतिक्रियालाई पनि बिस्तारै ठीक हुन्छन् भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ ।
स्मरणीय व्यक्तित्व गोविन्द शर्मा “विखर्ची” पौडेल
प्रेमप्रकाश गौतम श्रावण ८, २०७८
माता चन्द्रकला पौडेल र पिता हरिप्रसाद पौडेलका ज्येष्ठ सुपुत्रको रुपमा विसं १९९८ साउन २४ गते शुक्रबार पोखरा ६ स्थित जरेवरमा…
भोला शर्मा श्रावण ६, २०७८
नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित, सर्वपक्षीय समुन्नति र सर्वांगीण विकासका लागि क्रियाशील सार्वजनिक प्रशासनमार्फत जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गरेका हुन्छन्…
आत्म एक विवेचना
शिवप्रसाद गौतम श्रावण ३, २०७८
आत्मा के हो ? यसको उत्तर दिन कठिन छ । आत्माको बारेमा जान्न पर्दा जीवात्माको बारेमा ज्ञान हुनैपर्छ । प्राणीको…
इतिहासको ऐनामा राजा र राष्ट्रपति
मदन भण्डारी असार ३०, २०७८
१) प्रणयको प्रसंग – बलि राजा र युधिष्ठिरको वार्ता सर्वयुुग रोचक छ । बलिले सोधे, ‘तिम्री आमा कुन्ती साह्रै राम्री…
नेपाली भाषाको उत्थानमा भानुको अविस्मरणीय योगदान
शिवप्रसाद गौतम असार २९, २०७८
आदिकवि भानुभक्तले आफ्नो नामअनुसार नै नेपाली भाषाको प्रकाश छर्ने काम गरे जसका कारण भानुभक्त नाम चरितार्थ हुन गएको छ ।…